သင့်ဝန်ထမ်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လမ်းညွှန်သူဖြစ်ရန် နည်းလမ်း4ခု | Mycanvas
သင့်ဝန်ထမ်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လမ်းညွှန်သူဖြစ်ရန် နည်းလမ်း4ခု
ဝန်ထမ်းများအတွက် လမ်းညွှန်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ အရည်အချင်းများကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အပြင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပိုမိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုခံစားရစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသည် တစ်ဦးချင်းအကူအညီနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိနေသလို ခံစားလာရသည့်အခါ ယင်းသည် ဝန်ထမ်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင် ပျော်ရွှင်မှုကို တိုးတက်စေပြီး သူတို့အား အချိန်ကြာကြာ စွဲမြဲနေစေရန် တွန်းအားပေးနိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးသည် ကြီးမြတ်သောလမ်းညွှန်ဆရာဖြစ်ပုံကို နားလည်ကြသည်မဟုတ်ပေ။ Mentorships များသည် ထူထောင်ရန် ခက်ခဲသော်လည်း သင့်ဝန်ထမ်းများအား ထိုအဆင့်ကို ပံ့ပိုးပေးရန် အရေးကြီးနေသေးသည်။ ဤarticleတွင် သင်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြံပေးတစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်သည့် မတူညီသော နည်းလမ်းအချို့ဖြစ်သည်။
❗၁. ထူးခြားသော ချိတ်ဆက်မှုကိုရှာပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ဝန်ထမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးစားနေပါက၊ တစ်ဦးချင်းစီ လိုချင်သည် သို့မဟုတ် လိုအပ်သည်များကို သိရှိရန် ခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဝန်ထမ်းများအတွက် ကောင်းမွန်သော လမ်းညွှန်တစ်ဦးဖြစ်ရန်၊ အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးစီနှင့် စစ်မှန်သောထူးခြားသောချိတ်ဆက်မှုများကို ဖန်တီးရန် အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည် ။
၎င်းတို့ကိုသိရှိရန် အချိန်အနည်းငယ်ပိုယူရမည်ဟုဆိုလိုသော်လည်း၊ အချို့သောချိတ်ဆက်မှုများသည် အခြားအရာများထက် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ခိုင်မာသော နားထောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် အသေးစိတ်ကို အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် မည်သည့်ဝန်ထမ်းနှင့်မဆို ကောင်းမွန်သော လမ်းညွှန်မှုတစ်ခုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
❗၂. စတင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သက်တူရွယ်တူ လမ်းညွှန်ဆရာများကို ခန့်ထားပေးပါ။
အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းစတင်စဉ်ကာလကဲ့သို့ အနည်းငယ်ပိုမိုအာရုံစိုက်ရမည့်အချိန်များတွင် သင့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးစီအား တစ်ဦးချင်း လမ်းညွှန်မှုပေးရန် အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်၊ သင်တန်းနှင့် စတင်ခန့်အပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကူညီပေးနိုင်သော အခြားဝန်ထမ်းများနှင့် ငှားရမ်းအသစ်များကို ချိတ်ဆက်ပါ။
အရည်အသွေးရှိသော သက်တူရွယ်တူ လမ်းညွှန်ဆရာများတွင် ယခင်က ရာထူးရှိသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အလားတူအတိတ်အတွေ့အကြုံရှိသူ တစ်ဦးပါဝင်နိုင်သည်။
သို့သော်၊ သင်သည် နည်းပြများကို အတင်းအကြပ် တွန်းအားပေး၍ မရနိုင်ကြောင်းနှင့် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် အချိန်ဖြုန်းခြင်းသာ ဖြစ်မည်ကို သတိရပါ။ ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး ချိတ်ဆက်နေပုံမပေါ်ပါက၊ ပိုမိုသင့်လျော်မည့် အခြားနည်းပြကို အကြံပြုပါ။
❗၃။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုကို အားပေးပါ။
ဝန်ထမ်းများကို လမ်းညွှန်ပေးခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းနှင့် ရာထူးကို အမှန်တကယ် အခွင့်ကောင်းယူရန် လိုအပ်သော အားပေးမှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုများကို ပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည် – သို့သော် ၎င်းထက် ပို၍ လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ လမ်းညွှန်ဆရာတစ်ဦးသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ပိုကောင်းအောင် တွန်းအားပေးသင့်ပြီး ၎င်းတို့အား ပိုမိုတိုးတက်စေရန် တွန်းအားပေး သို့မဟုတ် ပိုကြိုးစားသင့်သည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို ပေးကမ်းအားပေးခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တုံ့ပြန်ချက်ပေးသည့်အခါ အမြဲတမ်း အကျိုးရှိအောင်နေရန် မမေ့ပါနှင့်။ သင့်ဝန်ထမ်းက သင့်အား ပေးကမ်းသော ဇွဲလုံ့လကို ဦးစွာမတန်ဖိုးထားဘဲ အပြုသဘောဆောင်သော အလုပ်ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ယင်းနောက်၊ ၎င်းတို့ မည်သို့တိုးတက်နိုင်သည်ဆိုသည့် ရှင်းလင်းပြတ်သားသောခြေလှမ်းများအပြင် ထိုတိုးတက်မှုများဖြစ်လာစေရန်အတွက် ပန်းတိုင်များထားရှိပါ။
❗4. စာနာမှုကို သတိရပါ။
သင်စိတ်ဖိစီးနေချိန် သတ်မှတ်ရက်ထက်နောက်ကျပြီး နေဝင်ချိန်မှ နေဝင်ချိန်အထိ အလုပ်လုပ်ပါက ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမြင်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လွယ်ကူသည်။ သို့သော်လည်း သင့်ဝန်ထမ်းများထံ ထိုအဆိုးမြင်စိတ်များ ထွက်မလာစေရန် သို့မဟုတ် သင့်ရုံးခန်း၏ စွမ်းအင်ကို ကျဆင်းစေခြင်းမပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူနှင့် လမ်းညွှန်ပေးသူအဖြစ် စာနာနားလည်မှုသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ဝန်ထမ်းများ အလုပ်ခွင်အတွင်းရော အပြင်မှာပါ တွေ့ကြုံနေရသော ဖိအားများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို နားလည်နိုင်လျှင် ၎င်းတို့အား ပိုမိုခိုင်မာသော ပံ့ပိုးမှုစနစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
သင်၏နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုလေ့ကျင့်ပါ။ သင့်ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏အလုပ်ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သောအကူအညီ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အချိန်များကို ပေးအပ်ထားကြောင်း သေချာစေရန်မှာ သင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် သင်တစ်ဦးတည်း တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်၊ သင့်ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့၏အလုပ်များကို ထိရောက်စွာပြီးမြောက်စေရန်အတွက် လိုအပ်သောအကူအညီ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အကူအညီများအားလုံးကို ရရှိကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် သင်သည် တာဝန်ရှိပါသည်။
နည်းပြဆရာကဲ့သို့ သင့်ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ချဉ်းကပ်ပါ။ ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များကို နားထောင်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တွန်းအားပေးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်နေသော အလုပ်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။